Businessdị Azụ S-Corporation
Slọ ọrụ S bụ ụdị ụlọ ọrụ azụmaahịa aha ya bụ ahaziri ya n'ihi na ahaziri ya n'ụzọ ọ ga-ezute, ọ daa n'okpuru purview, nke IRS Revenue Code subchapter S. n'ọtụtụ ụzọ, ọ dị ka ụlọ ọrụ ọdịnala, mana ya na ụfọdụ mmekorita-nke dị ka omume nwere ike ịbara ụfọdụ ụdị azụmahịa aka. Otu uru kacha mkpa a na-emeso dị ka isi ụlọ ọrụ S isi bụ ịkwụ ụtụ isi. Tụ ụtụ isi ga-adị mgbe a na-akwụ ndị na-eketa oke ụgwọ na ọkwa onye ọ bụla, dịka mmekorita, karịa ibido na ọkwa ụlọ ọrụ, ọzọkwa na ọkwa onye ahụ. Nke a na-enye ndị nwe ụlọ ọrụ kacha mma nke ụwa abụọ n'ọtụtụ oge - uru ụtụ ụtụ nke mmekorita dị mfe, yana obere mmachi na nchebe nke ụlọ ọrụ na-enye.
Uru ụtụ isi
A na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ọkọlọtọ (ma ọ bụ "C") na ego ọ na-enweta dị ka ụlọ ọrụ, mgbe ahụ, a na-atụ ụtụ ọ bụla maka ndị na-ekenye ndị ọzọ n'otu oge (ihe dị ka 15% maka ụtụ Federal). A maara nke a dị ka ụkọ ụtụ ego abụọ ma ọ bụ otu n'ime ebumnuche kpatara ịdị adị nke S Corporation.
N’aka nke ọzọ, a naghị atụ ụtụ n’ụlọ ọrụ ahụ. Kama nke ahụ, a na-atụ ụtụ isi ya dabere na nkesa ndị na-ekenye ya na ọnụego ala nke otu onye. Otu ihe ị ga-eburu n’uche bụ na ụtụ isi a na-apụta ma enwere nkesa zuru oke maka ndị na - ekenye ndị ọzọ. Nke a pụtara na a na-atụ ụtụ ego naanị otu ugboro, ka ọ bụrụ nkesa maka ndị na-ekenye ya.
Taxzọ ụtụ a ga - esi nweta ụtụ nwere ike ịbụ ụfụ na nsogbu. Iji maa atụ, ka anyị were ụlọ ọrụ na-eche echiche nke aha ya bụ Wallaby, Inc. Anyị ga-ekwu na enwere ndị mmekọ atọ, John, Jack, na Jekọb, na John nwere 50%, Jack nwere 25%, Jekọb nwekwa 25%. Wallaby, Inc. nwetara $ 10 nde afọ gara aga dị ka ego a na-enweta na net. N'oge ụtụ isi, John ga-ekwupụta nde $ 5, Jack $ 2.5 nde, na Jekọb nde $ 2.5 fọdụrụ. Ọ bụrụ na John, dị ka onye nwe ọtụtụ, kpebiri ịghara ikesa uru ego a na-enweta na ya, John, Jack na Jekọb ka ga-akwụ ụtụ isi maka ego a na-enweta ka a ga-asị na ekesa nkesa n'ụzọ ahụ, agbanyeghị na ọ nweghị onye n'ime mmadụ atọ ahụ nwetara ụgwọ n'ezie. nkesa ego. Enwere ike imeghari onodu a site na ihe a na - akpo “otutu ihe egwu” site na otutu onye ibe (ma obu ndi n’ebukota oso) n’ime mwepu nke onye ozo ma obu onye n’adighi nma.
Na ụlọ ọrụ ọdịnala, n'agbanyeghị na enwere ụtụ ụlọ ọrụ mbụ, enweghị ụtụ ụtụ na ọkwa onye nwe ụlọ ọ gwụla ma ọ bụrụ na ekesara nkesa n'ezie.
Mmachi ọzọ na S Corporation bụ eziokwu bụ na ọnụọgụ ndị na - eketa oke nwere 100, ọ bụrụ na enwere naanị onye nwe ya, enwere ihe iyi egwu mgbe ọ bụla na IRS leghaara ọkwa S isi ma mesoo ụlọ ọrụ ahụ dịka ụlọ ọrụ ọkọlọtọ. maka ụtụ isi. Nke a nwere ike bụrụ ikpe mgbe enwere ụdị nha anya pụọ ​​n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
Corporationlọ ọrụ S Corporation
Formmepụta ọgbakọ dị ka ụlọ ọrụ S na-apụtakwa na, dị ka ya na ụlọ ọrụ ọdịnala, a ga-ahụrịrị usoro nke ụlọ ọrụ. Kpụrụ ụlọ ọrụ bụ ọrụ nke onye isi ụlọ ọrụ, ndị isi ọrụ, ma ọ bụ ndị na-ekenye ụlọ ọrụ ga-emerịrị iji nwee ike na-echedowu ụlọ ọrụ ahụ. Ndị a bụ usoro dị mkpa na-enyere aka ichekwa akụ nke ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ, ndị isi na ndị nwe ụlọ ọrụ.
Enwere ike ichikota usoro ya dika ndi a:
A ga-echekwa ego ejiri eme ya iche na iche na ego onwe ya.
A ga-enwerịrị nzukọ Nzukọ Kwa Afọ.
A ga-enwerịrị nkeji nke poratelọọrụ na onye ọrụ agha idozi ma lekọta nkeji.
Nsonye, ​​ụlọ ọrụ, na ịnweta usoro niile ga-abụrịrị ede ede.
Enwere ike ịchọta mkparịta ụka miri emi na nkọwa nke ụlọ ọrụ na ngalaba anyị nwere a Ndekọ nke Corlọọrụ. Ọzọkwa, ọ na-ekwupụta na idobe usoro iwu ụlọ ọrụ bụ ihe achọrọ maka ịrụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ ọ bụla. Formkpụrụ ndị a na-enye aka ichekwa obere ọrụ yana ụgwọ ụtụ isi nke ndị ụlọ ọrụ nyere.
Ederede maka Subchapter S Ọgwụ
Nzọụkwụ dị mkpa iji nweta ọnọdụ ụlọ ọrụ S adịghị mgbagwoju anya, mana achọrọ nlebara anya anya na ha iji hụ na ọnọdụ ahụ na-egbochi nyocha na uru nke ọnọdụ ahụ.
Iji bido, onye nwe ụlọ ọrụ dị ugbu a, ma ọ bụ onye nwe ụlọ ọrụ ọhụrụ, ga-arụ IRS Form 2553, yana akwụkwọ mpaghara ọ bụla ma ọ bụrụ na ọnọdụ obibi maka ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ ụlọ ọrụ S (ụfọdụ steeti na-emeso ụlọ ọrụ niile. otu a, ma ndị ọzọ na-enye ohere maka ịkọwapụta S ma soro usoro ụtụ isi yiri nke ahụ. Mmezu na ntuli aka nke ntuli aka a kwesiri ime tupu ụbọchị 16 nke ọnwa nke atọ na-esochi mmechi afọ nke ụlọ ọrụ iji wee nwee ike ịtụle ụlọ ọrụ maka ọnọdụ S n'oge afọ ụtụ isi ahụ. Porationlọ ọrụ ahụ kwesịrị iru eru ruru eru maka S Corporation n'oge ọnwa 2.5 ndị a kpọtụrụ aha, ndị niile nwere ụlọ ahịa ga-ekwenye ọkwa ahụ, agbanyeghị ma ha nwere ma ọ bụ na ha nwere n'oge mgbanwe ọnọdụ.
Ọnọdụ ịt ụ nt ụ nt ụ nt ụ
Enwere ike ịhapụ ọnọdụ S Corporation site na njikere site na ịdọrọ nkwupụta ziri ezi nke nchupu. Enwere ike ịme ụdị nwepu ọnọdụ a naanị site na nnabata na nkwenye nke ndị oke oke. Usoro zuru ezu, yana ozi nkwado niile dị mkpa, enwere ike ịchọta ya na ngalaba iwu IRS 1.1362-6 (a) (3) yana Ntuziaka maka IRS Fọọsi 1120S, Nchịkwa ụtụ nke US Maka ego maka S Corporation.
Nwepu aka ma ọ bụ ịkwụsị ọnọdụ nwere ike ịda oge ọ bụla ụlọ ọrụ iwu, dị ka IRS ma ọ bụ State Franchise Tax Board, kwupụtara mmebi nke ntozu chọrọ, ma ọ bụ oke mbibi dị ukwuu, ọdịda ọ bụla na-elele usoro ụlọ ọrụ na-eweta ajụjụ. ikike ụlọ ọrụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ.
Shouldnye kwesịrị ịhazi dịka S Corporation?
Mkpakọrịta, otu ndị nwere ego, ma ọ bụ ọbụna ndị nwe ụlọ ọrụ dị ugbu a na-achọ abamuru nke ịnụ ụtọ ụgwọ na ụtụ ụtụ kwesịrị ịtụle ọkwa S Corporation, ma ọ bụrụhaala na enwere ike irube isi ma jigide iwu maka iru eru. Enwere ọtụtụ uru a ga-enweta site n'ụdị nzukọ a, agbanyeghị na nke a bụ mkpebi nke ekwesịrị ịme ya site na enyemaka nke onye ama ama nke maara na inlọọrụ Ski.
Slọ ọrụ S (nke akpọrọ aha maka nke a n'ihi nzukọ ọ na-ezute ihe ndị IRS chọrọ ka atụ ụtụ ha n'okpuru Subchapter S nke Usoro Ego Nweta) bụ ụlọ ọrụ ebe emere ntuli aka ịtụ ụtụ ahịa Subchapter S ka ewee lebara ya anya dị ka ngafe. Ndi ozo maka ebumnuche ugo, dikariri nnweko nke ego ya ma obu ihe ya "na agabiga" na nloghachi nke onye nwe ya (na ntinye aka na ntinye ma obu nwe ya na ulo oru ahu), ebe ha na enye otu nche-nche nke aku na si ibu dị ka ụlọ ọrụ ọdịnala. Ndị na - eketa ego ga - akwụ ụtụ ego nke onwe ha dabere na ego nke ụlọ ọrụ S, n'agbanyeghị ma ekesara ya ma ọ bụ na - ekenyeghị ya, mana ha ga - ezere "ụtụ isi abụọ" nke dị na ụlọ ọrụ ọdịnala (ma ọ bụ ụlọ ọrụ "C").
Nnukwu ọdịiche dị n'etiti ụlọ ọrụ ọdịnala na S Corporation
N'ihi “ụgabiga” ya, ụlọ ọrụ S n'okpuru ụtụ isi na ọkwa ụlọ ọrụ, yabụ zere ọnọdụ nke "ụtụ isi abụọ" (n'ụkpụrụ ọkọlọtọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọdịnala, a na-ebu ụzọ na-enweta ego azụmaahịa na ọkwa ụlọ ọrụ. , mgbe ahụ nkesa nke residal nke onye ahụ na-eketa ego na-atụ ụtụ ọzọ dịka 'ego' nke onwe ya) nke dakwasịrị ụlọ ọrụ C.
N'adịghị ka ndị ụlọ ọrụ C na-eketa nke na-atụ ụtụ na ọnụego gọọmentị etiti nke 15.00%, ụlọ ọrụ S na-eke (ma ọ bụ nke akpọrọ “Nkesa” n'ụzọ ziri ezi) na-atụ ụtụ ego nke ndị nwe ya. Agbanyeghị, nkenke ụlọ ọrụ c na-akwụ ụgwọ ụtụ nke abụọ ekwuru n’elu. A na-ebu ụzọ tinye ego ahụ na ọkwa ụlọ ọrụ tupu ekesaa ya dị ka nkewa ma tinyezie ya dị ka ego na-akpata mgbe enyere ndị na-ekenye ndị mmadụ ego.
Dịka ọmụmaatụ, Cogs Inc, ka etolite dika ụlọ ọrụ S, na-eme nde $ 20 n'ime ego netwọsọn ma nwekwaara ya 51% site n'aka Jack na 49% site n'aka Tom. Na nloghachi ụtụisi onwe nke Jack, ọ ga-akọọ nde $ 10.2 n'ime ego yana Tom ga-akọ nde $ 9.8. Ọ bụrụ na Jack (dị ka onye nwe ọtụtụ) kpebiri na ha agaghị ekesa uru ego a na-enweta na ya, Jack na Tom ka ga-akwụ ụtụ isi maka ego a na-enweta ka a ga-asị na ekesa nkesa n'ụzọ ahụ, n'agbanyeghị na onweghị ego nkesa ego. Nke a bụ ọmụmaatụ nke ụlọ ọrụ “squee-play” enwere ike iji mee ihe iji chụpụ onye otu dị obere.
Ebumnuche azụmaahịa nke S Corporation
Inwe ọnọdụ ụlọ ọrụ S na-enye ọtụtụ uru dị ukwuu maka ụlọ ọrụ. Nke mbu, n’ezie, bu ebumnuche nke inweta oke amachi, ma obu iwelata nsogbu nke iwu onwe ya, ma obu uzo ozo nke ndi mmadu nwegasiri, ndi nwekwaara onwe ha, ma chebe ha na emetuta ulo oru ahu. ndị ọzọ nwere oke dịka ndị mmadụ n'otu n'otu. Uru nchekwa a bara uru bụ ụlọ ọrụ ọdịnala na ụlọ ọrụ S. Ihe ndị ọzọ akọwapụtara maka ụlọ ọrụ S bụ uru ụtụ isi gafere. Ezie na enwere oke dịka ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe iji mezuo ihe ndị IRS chọrọ maka ọnọdụ ụlọ ọrụ S, ọtụtụ ụlọ ọrụ dabara adaba nha (n'ọtụtụ oge, ọ bụghị karịa 75 na 100 ndị na-eketa òkè) ịhọrọ ịbụ. taxed dị ka ụlọ ọrụ S n'ihi na ọ na-enye onye ọ bụla nwere ike ị nweta oke ahịa ego azụmaahịa. Porationlọ ọrụ ahụ nwere ike inyefe ndị nwe ụlọ ọrụ ego ozugbo ma zere ụtụ isi abụọ dị na nha nke ụlọ ọrụ ọha na eze, ebe ha ka na-enweta uru dị na njikwa ụlọ ọrụ ahụ.
Ọnọdụ S Corporation ịhọrọ
Electhọrọ ụlọ ọrụ Electhọrọ S nwere ụgwọ ụtụ isi pụtara. Ọnọdụ S na-enye ndị nwe ụlọ ohere itinye uru ụlọ ọrụ na ọghọm na nloghachi ụtụ isi onye ọ bụla. Iji họrọ ọnọdụ S, mmadụ ga-ebu ụzọ tinye dịka ụlọ ọrụ C n'ozuzu wee pịa IRS form 2553. Ọ bụrụ n’itinyela akwụkwọ na nso nso a, ụlọ ọrụ gị nwere ike itinye akwụkwọ maka ọnọdụ S n’oge ọ bụla n’oge afọ ụtụ n’etiti ụbọchị 75 nke ụbọchị ịgụnye. Ma ọ bụghị ya, a ga - emerịrị ihe a ka ọ bụrụ na Machị 15 ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ bụ ụtụ ụtụ isi afọ, iji mee ka ntuli aka wee rụọ ọrụ maka afọ ụtụ isi dị ugbu a. Corlọ ọrụ nwere ike ikpebi ịhọrọ ọkwa ụlọ ọrụ S, mana mkpebi a agaghị emetụta ruo afọ na-eso ya.
Akpachara Anya Anya Ego
Ego a na-anabataghị bụ ego ọ bụla a na-enweta na ntinye ego; yabụ ebuka, agbụ, ego ịha nhatanha, ezigbo ụlọ, wdg. A na-ewepụta ego maka ọrụ site na ọrụ enyere, ngwaahịa ana ere, wdg Ọ dị mkpa ijide n'aka na ụtụ ego ụlọ ọrụ S gị adịghị agafe 25% nke nnata ego ụlọ ọrụ ahụ. ihe karịrị afọ atọ n’usoro; yabụ ụlọ ọrụ gị ga - anọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ onye IRS kagburu ọkwa S ya. Nhọrọ kacha mma ma ọ bụrụ na azụmaahịa gị ga-enwe oke ego nwere ike ịbụ LLC.
Izu ike maka Ọnọdụ S Corporation
Iji tozuo maka ọkwa ụlọ ọrụ S, a ga-emerịrị ihe ole na ole chọrọ. 1. A ga-ehiwe ụlọ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ maka ọrụ maka uru maka ọrụ uru maka ụlọ ọrụ C niile. 2. Gbaa mbọ hụ na ụlọ ọrụ gị enyela naanị otu klas ebe a. 3. Ndị niile na - eketa oke bụ ụmụ amaala US ma ọ bụ ndị bi ebi. 4. Enwere ike ghara inwe karịa ndị na-ekenye 75. 5. Onu ego nke ulo oru gi anaghi agabiga na 25% nke oke nnabata ego amachighi. 6. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere afọ ngwụcha ụtụ isi na-abụghị Disemba 31, ị ga-etinyerịrị ikike maka IRS. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị ezutela ihe niile dị n'elu, ịnwere ike itinye faịlụ 2553 na IRS iji họrọ ọkwa S.
S Corporation na LLC
Enwere ike inwe ụlọ ọrụ nwere ikike nwere obere ọrụ (nwere ya dị ka “ndị otu”), ụlọ ọrụ LLC ndị ọzọ, ndị mmekọ na ntụkwasị obi na ụmụ amaala na-abụghị ndị US. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ S, nwere ike ịbụ nke ụmụ amaala US ma ọ bụ ndị ọbịa na-adịgide adịgide. Otu LLC nwere ike inye ọkwa dị iche iche / klaasị otu ebe otu ụlọ ọrụ S nwere ike ịnye otu klas. Otu LLC nwere ike nwee ọnụ ọgụgụ ndị otu mana ụlọ ọrụ S nwere obere 75 na ndị nwere 100 nwere oke (dabere na iwu obodo steeti etolite ya). Mgbe onye nwe ụlọ ọrụ S n'ụlọ ọrụ wee gbaa akwụkwọ na mkpesa nke onwe ya, ọ bụghị nke azụmaahịa, ihe ndị dị na ya bụ akụ nwere ike weghara. Mgbe onye otu LLC gbara akwụkwọ na mkpesa nke onwe ya, ọ bụghị nke azụmaahịa, enwere usoro iji chekwaa ike ịbụ onye anapụrụ onye otu ya.
Okwu Iwu Kwadoro na S Corporation
N’ezie, enwere ụfọdụ usoro nchịkwa na ihe aga-eme ka ekwesiri idobe ụlọ ọrụ maka ụlọ ọrụ S. Nke mbu, ndi nwe oke ulo oru ndi nwebu (ma obu onye malitere ulo oru ohuru) aghaghi ime ntuli aka ka oburu onye S S n’elu IRS Form 2553 (ya na mpempe ya kwekorita na steeti bu nke etinyere na ya) tupu ubochi 16 nke ọnwa nke atọ na-esochi imechi afọ ụtụ ụlọ ọrụ C ma ọ bụrụ na ntuli aka ga-adị irè maka afọ ụtụ isi ugbu a. Corlọ ọrụ C kwesịrị iru eru dị ka ụlọ ọrụ tozuru oke n'oge ọnwa 2 1 / 2 na ndị niile na-ekenye ya n'oge ọnwa 2 1 / 2 ga-ekwenye, ọbụlagodi na ha enweghị ngwaahịa n'oge ntuli aka. Ọ bụrụ na edere ntuli aka ahụ mgbe ụbọchị 15 nke ọnwa nke atọ nke afọ ụtụ isi, ntuli aka ga-adị maka afọ ụtụ isi na-esote ya na ndị niile nwere oke ntuli aka n'oge ntuli aka ahụ ga-ekwenye.
Nkwụsị nke Ọnọdụ S Corporation
A na-eme ngwụsị afọ ofufo na ntuli aka nke S site na ịdepụta nkwupụta na Servicelọ Ọrụ Ọrụ ebe a na-etinye akwụkwọ ntuli aka izizi nke ọma. Enwere ike iwepu ya naanị site na nkwenye nke ndị nwe ụlọ ahịa, ndị mere n'oge mwepu ahụ, jigide ihe karịrị ọkara nke ọnụọgụ nke ngwaahịa enyere aka na ngwaahịa pụrụ iche (gụnyere ngwaahịa enweghị ego). Enwere ozi a kapịrị ọnụ nke a ga-etinye na nkwupụta a wee kọwapụta ozi a na ngalaba Ntuziaka 1.1362-6 (a) (3) yana Ntuziaka maka IRS Form 1120S, Nchịkwa ụtụ Intụ Ego US maka Corporationlọ Ọrụ S.
Nwepu ahụ nwere ike ikwupụta ụbọchị dị mma ma ọ bụrụhaala na ọ bụ ma ọ bụ mgbe ụbọchị mkpesa. Ọ bụrụ na akọwapụtaghị ụbọchị na iwepu akwụkwọ tupu ụbọchị 15 nke ọnwa nke atọ nke afọ ụtụ, iwepu ga-adị irè maka afọ ụtụ isi. Ọ bụrụ na edegharị akwụkwọ mgbe ụbọchị 15 nke ọnwa nke atọ nke afọ ụtụ, iwepụ ga-adị irè maka afọ ụtụ isi na-abịa.
Okwesiri mhazi ụlọ ọrụ m ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ S?
Y’oburu n’icho ka ulo oru gi nwee ndi nwere ihe kariri iri-abuo (ma n’enweghi ala na steeti nke gi) na ighota uru di na ya site na mgbe ị gabu n’otu oge ighota nsogbu di na ya. ikesa, ”ị ga-ezukwa ihe iwu chọrọ akọwapụtara n'elu, mgbe ahụ ụlọ ọrụ S nwere ike ịga n'ụzọ dị ukwuu iji mee ka azụmahịa gị baa uru ma nwee mmasị na ndị ọchụnta ego kwesịrị ekwesị.
Uru Azụmaahịa Nevada